लोहनीकी आमा भन्छिन्-धमला खरो पत्रकार भए नि उनको प्रश्न किन हासेर टारिन्छ ?
काठमाडौं । चर्चित स्वर्गीय पत्रकार इन्द्र लोहनीको आमा हरिमाया लोहनीले आफ्नो छोरा गुमाएपनि देशका सबै छोराहरु आफ्नो छोरा भएको बताएकी छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सबै छोराहरु मिलेर समृद्ध देश बनाउन लाग्नु पर्ने सुझाईन् । उमेरले ७० पार गरिसकेकी हरिमाया लोहनी अहिले घरमा बसेर सुईटर बुन्छिन् ।
घरवर पर जडिबुटीका बिरुवा लगाएकी छन् । भन्छिन्, आफुले जानेको कुरा पुस्तान्तरण होस भन्ने मेरो चाँहना हो , तर नयाँ पुस्ता खाँसै चाँख दिदैंनन् । चर्चित पत्रकार इन्द्र लोहनीको आमा भएपनि उनी आफ्नै परिचय दिने गरेकी छन्, हरिमाया लोहनी घर झापा ।
परिचय दिँदा आमा इन्द्र लोहनीको आमा भन्नुनी ?: उनले भनिन्, सबैको आफ्नै परिचय छ, म मेरो परिचयले नै चिनिन चाहान्छु ।
त्यसो भए छोराको नामको जस लिने अधिकार छैन त तपाईलाई ? छ , तर त्यो जस मैले लिने हैन तपाईहरुले दिने हो ।
साहित्यमा अब्बल हरिमायाले एउटा मेरी आमा नेपाल नामक पुस्तक पनि प्रकाशन गरेकी छन् । बितिसकेको छोराको उनी खाँसै कुरा गर्न चाहादिनन् । जे छ मनै छ छ भन्छिन् । तर उनले एउटा कुरा उक्काईन्, छोरा इन्द्रले सानैमा आफुले लगाएको सुईटर साथीलाई दिएछ, आमाले भनिन्, किन दिएको भन्दा उस्को केहि छैन दिए आमा भन्यो । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा स्वभावको थियो ।
पत्रकारितामा पाएको तलब पनि गरिब दु:खीको सेवामा नै सकेको आमाको भनाई छ । हामीले तलब देख्न पाईनौ, सबै गरिव दुखीलाई बाढ्थियो ।
स्मरण रहोस, झण्डै ११ बर्षअघि हृदयाघातका कारण निधन भएका इन्द्र लोहनीलाई टिभी टक शोका लोकप्रिय प्रस्तोता र सर्वोच्चका अधिवक्ताका रुपमा त्यसताका धेरैले चिनिएका थिए । तर पछिल्लो पुस्ताका लागि उनको नाम गुमनाम प्राय: छ । तर उनलाई जान्नेहरु टेलिभिजन टक सो मा यतिको आटि र खरो बहस गर्ने आजसम्म नभेटिएको स्विकार गर्छन् । यतिमात्र हैन, उनले सोधेको प्रश्न आफैतिर फर्कियो भने पनि दमदार उत्तर दिन सक्थे ।
आमा इन्द्रमायासँगको कुराकानी बाँकी भिडियो